China 220kV Double Loop Gudbinta Tower Warshada iyo Warshada |Tower XY
Halkan u fiirso, 10 sano oo heer sare ah, Khibrad Dhoofinta dibadeed hodan ah, oo ku takhasustay munaaradda khadka gudbinta, munaaradda isgaarsiinta iyo qaab dhismeedka korantada,Hel faahfaahinta xiriirka hadda!
⦁Shirkad Shiineys ah oo koronto isku dhafan, oo inta badan siisa alaabooyin koronto oo kala duwan shirkadaha tamarta gudaha iyo dibadda iyo macaamiisha warshadaha tamarta-sare leh.
⦁ Ku takhasusay soo saaraha goobtamunaaradda khadka gudbinta / tiirkagudbinta iyo qaybinta korontadamunaaradda isgaarsiinta, qaab dhismeedka substationiyotiirka nalka waddadaiwm. sidoo kale saamile muhiim ah oo soo saaraha transformer-ka ah, soo saaraha xaashida birta silikoon iyo xarun koronto.
⦁ Si aan u noqono kuwo wax ku ool ah gudashada waajibaadkeena iyo bixinta adeegyada macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.
⦁ In aan si hufan u maarayno waajibaadkeena iyo adeegyadeena si aan u gaarno natiijada ugu badan wakhtiga ugu yar ee suurtogalka ah.
Adeegyadayada iyo alaabadayada asaasiga ah waxay ka kooban yihiin:
qaab dhismeedka saldhiga korontada
Qaab dhismeedka PV
Tower Gudbinta Korontada
Taawar gudbinta ama taawar koronto (Pylon koronto ama pylon koronto oo ku taal Boqortooyada Ingiriiska, Kanada iyo qaybo ka mid ah Yurub) waa qaab dhismeed dheer, badiyaa munaarad shabag ah oo bir ah, oo loo isticmaalo in lagu taageero khadka korontada sare.
Waxaa loo adeegsadaa nidaamka koronto-sare ee AC iyo DC, waxayna ku yimaadaan qaabab iyo cabbirro kala duwan.Dhererka caadiga ah wuxuu u dhexeeyaa 15 ilaa 55 m (49 ilaa 180 ft), in kasta oo kuwa ugu dhaadheer ay yihiin munaaradaha 370 m (1,214 ft) ee dhererka 2,700 m (8,858 ft) ee jasiiradda Zhoushan ee dusha sare ee Powerline Tie.Birta ka sokow, waxaa la isticmaali karaa waxyaabo kale, oo ay ku jiraan shub iyo alwaax.
munaaradda xagasha-birta ah, munaaradda isgaadhsiinta qaab dhismeedka afargeesoodka caadiga ah, iyadoo la adeegsanayo Q345B bir tayo sare leh oo ah qalabka ugu muhiimsan ee munaaradda, qaab dhismeedka adag, qallooca yar;Xidhiidhka kabidda birta xagasha, qaybo-fudud, munaarad gacanta ayaa lagu qaadi karaa laguna rakibi karaa qiimo jaban.Ugu badnaan 6 lakab oo madal ah ayaa lagu qalabayn karaa, madal kastaa waxay taageertaa 6 anteeno.
Qalab Caadi ahaan Q345B/A572, Xoogga Wax-soosaarka ugu Yar ≥ 345 N/mm²
Q235B/A36, Xoogga Wax-soosaarka ugu Yar ≥ 235 N/mm²
Sidoo kale gariiradda duuban ee kulul ee ASTM A572 GR65, GR50, SS400, ama heer kasta oo kale oo macmiilku u baahan yahay.
Awoodda Awoodda 200KV
alxanka Alxanka wuxuu u hoggaansamaa heerka AWS D1.1.
alxanka CO2 ama hababka auto arc quuska hoose
Ma jiro dillaac, nabar, isku dhejis, lakab ama cillado kale
Alxanka gudaha iyo dibadda ayaa tiirka ka dhigaya mid aad u qurux badan qaab ahaan
Haddii macaamiishu u baahan yihiin shuruudo kale oo alxanka, waxaanu sidoo kale samayn karnaa hagaajin sida codsigaaga
Galvanization Galvanization Qulqulka Kulul ee waafaqsan heerka Shiinaha GB/T 13912-2002 iyo heerka American ASTM A123;ama heer kasta oo kale ee macmiilka looga baahan yahay.
Wadajir Isku-dhafka qaabka gelinta, qaabka flange.
Rinjiyeynta Sida ku cad codsiga macaamiisha
Heerka galvanized: ISO:1461-2002
Shayga Dhumucda dahaarka zinc
Heerka iyo shuruudaha ≧86μm
Xoogga adhesion Daxalka CuSo4
Jaakad Zinc ah lagama qaadin oo aan kor loo qaadin dubbe 4 jeer
Hore: 132kV Single Xagalka Birta ah ee Wareegga
Xiga: 330kV Taawar Khadka Gudbinta Korontada